Hand Sanitizer, Sula iintsholongwane Sula-Zhongrong
Sinokubonelela ngemveliso njenge:
Isicoci sezandla; Iipesenti ezingama-75 zotywala. Ukusulwa kotywala; Amachiza eMichiza (iEthanol kunye neEthyl Acetate)
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava kugxilwe kushishino lokubulala iintsholongwane ngokusekwe kwi-R & D, ukwenziwa kunye nentengiso, sisungula i-brand TECH-BIO, kwaye sizimisele ukuyenza njengophawu lokuqala kwishishini lokubulala iintsholongwane eTshayina kuba sinelona tyala liphezulu Eveliswe sisityalo sethu.
I-TECH-BIO ngesandla isicoci kunye nesibulali-ntsholongwane sinokusetyenziswa kakhulu kuzo zonke iindawo zikawonke-wonke ezinje ngekhemesti, iivenkile ezinkulu, isibhedlele, iihotele, isikolo, njalo njalo kunye nosapho ngokunjalo. Iimveliso zethu zemveliso yemichiza: i-ethyl ethanol kunye ne-acetate ye-ethyl inokusetyenziselwa isityalo sokuxuba amayeza, ishishini leekhemikhali entle, njl.
I-TECH-BIO yokuhlanjululwa kwezandla kunye nesibulali zintsholongwane zombini ziqukethe izinto ezisebenzayo i-75% yotywala enokubulala i-99.99% yeentsholongwane eziqhelekileyo kunye ne-covid-19 ukukhusela impilo yethu. Iimveliso zethu zongezwe njengezithako ezizodwa zokunyibilikisa ukuze kungabikho kwenzakalisa ezandleni zethu. Siza kuhlala sibonelela ngeemveliso ezingcono nezibhetele zokuzikhusela kubathengi behlabathi.
I-Zhongrong Technology Corporation Ltd (ikhowudi yesitokhwe: 836455), yasekwa ngo-1999 eyenye yamashishini amaTshayina aPhakamileyo-eTekhnoloji agxile kwiR & D, imveliso kunye nentengiso ye-ethanol engeyiyo ingqolowa kunye neemveliso zayo ezisezantsi. Yeyona mveliso inkulu ye-ethanol engeyiyo ingqolowa e-China, kunye nomvelisi omkhulu we-acetate eMantla e-China nase-North-East China.